Jet set, antoko miafina. - Bokin'izao tontolo izao
Jet set, antoko miafina.
Jona 14, 2021 ny Amanda seibiel
Aiza no hividianana ny kitapo Jet manual, antoko miafina. avy amin'i Amanda Seibiel?
Jet Set. Antoko miafina
Fifamoivoizana inona no napetraky ny Jet manual, antoko miafina.?
Zazavavy dimy amby roapolo taona i Deva Jones izay tsy mbola nahalala ny fitongilana, manana olana hafa eto an-drenivohitra izy amin'ny fanahiana momba ny fitongilanana. Miasa ao amin'ny trano fisakafoanana haingana any New York izy miaraka amin'i Estela sy Emma, ​​​​fa ny karama dia tsy misy be loatra ary miaina hatramin'ny farany izy. Rehefa misy fampandrenesana fiparitahana tonga ao amin'ny tranobe misy azy fa tsy azony omena vola dia mirodana ny zava-drehetra, io asfalta io no hany sisa tavela tamin'ny reniny nitaiza azy. Tamin'izay izy no nahazo ny tolo-kevitra hanatrika ho mpandroso sakafo iray amin'ireo fety manokana, fantatra amin'ny anarana hoe Jet Set, nokarakarain'ny mpiaro ny tanàna. Ao amin'izy ireo, ny fitondran-tena ratsy, ny firaisana ara-nofo ary ny filan'ny nofo dia misy fisaratsarahana ao amin'ny tsiambaratelo voafaritra indrindra, satria ny filozofian'ireo antoko ireo dia ny "mivadika mba hitoetra ho mahatoky". tontolo vaovao izay tsy azonao antoka fa vonona ianao. Azonao ve ny maha-zava-dehibe ny fitsaharana? Takatrao ve fa tsy afaka mifehy foana ianao?
Fampahalalana momba ny bokin'ny Jet set, antoko miafina.?
"Ny boky Jet set, antoko miafina. de Editorial MueveTuLengua miaraka amin'ny ISBN 978-84-17938-25-3 (EAN 9788417938253) navoakan'ny Amanda Seibiel in Erotica. Ity boky ity dia voasoratra amin'ny Softcover na Pocket ary misy amin'ny RAFA ADRIÁN format, manana halavan'ny 400 páginas, lanjan'ny Gramin'ny 300, refy ny 230 x 150 mm. ary manana 04-06-2021 sary."
Inona koa no boky hafa nosoratan'i Amanda Seibiel?
Maso mainty (Erotika)
Ilay mpanotra sy ny Hotely Red Pleasure
Aza lavina amiko ny vatanao
Tao anatin’ny 24 ora no nitrangan’izany
Erotika tanteraka: Tantara vetaveta (fanontana vaovao)
Te ho faty eo anilanao fotsiny aho
Mandresy foana ny mpilalao (EXTREME)
Ataovy amiko izany araka ny fantatrao
Izay tiako no azoko
Inona avy ireo boky be mpamaky indrindra ao amin'ny MueveTuLengua?
Soa fa niala ianao
Na iza na iza ianao dia tiako ianao.
vinavina ny orana. Te hiaraka amiko ve ianao? (Kanto poetika)
Izao fiainana izao (Tononkalo)
Boky Torolalana ho an'ny olombelona kely (Essay)
Atolotra amin'ny endriny madio indrindra
Tiako ianao afaka (Tononkalo)
Fitiavana sy rikoriko: 7 (Prose Poétique)
Fitiavana sy rikoriko (Poétic Prose)
Tsy mitovy intsony izany (Poétic Prose)
Sokajy boky Tags MoveYourLanguage Ticket navigation
QUADERN D'ESTUDI LLENGUA CATALANA I LITERATURE 1 ESO SABRE FER
QUADERN D'ESTUDI LLENGUA CATALANA I LITERATURE 2 ESO SABRE FER